महाशिवरात्रीः एक संकटकालीन रात्रिको अवधि – Arthik Awaj
महाशिवरात्रीः एक संकटकालीन रात्रिको अवधि
By आर्थिक आवाज २०७५ फाल्गुन १५ गते बुधबार ०७:३१ मा प्रकाशित
– ब्र.कु. इ. बिन्नी
सर्वशास्त्रमई शिरोमणि गीतामा परमात्माको स्वरुप, अवतरण र निवासस्थानका बारेमा अनेक श्लोकहरुमा चर्चा भएको पाइन्छ जस्तै की १) यदा यदा ही धर्मस्य ग्लार्नी भवती भारत अभ्युत्थानमं…..२) हे अर्जुन, म अजन्मा छू, अकर्ता छू, अभोक्ता छू ३) म परकाया प्रवेश गर्दछु । अजन्मा परमात्माको दिव्य जन्म अर्थात संसारमा जब धर्म र मानवीय मूल्यहरुको ग्लानी हुन्छ हरेक क्षेत्रमा संकटकाल लाग्दछ । ती संकटहरुलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्न नै ज्ञान सागर परमात्मा शिव एक साधारण मानवीय तनमा प्रविष्ट भएर धर्तीमा दिव्य रुपमा अवतरण लिनुहुन्छ । जसको कर्तव्यवाचक नाम ब्रम्हा रहन जान्छ । ब्रम्हाको मुखारबिन्दुबाट निस्किएको परमात्मा प्रवक्त उक्त अनमोल ज्ञान र योगको विधी विश्वका चारै कुनामा फैलीने हुनाले शास्त्रमा ब्रम्हालाई चारमुखी पनि देखाइन्छ ।
सृष्टि इतिहासमा कुनै घटना घट्दछन् र त्यस घटनाले सृष्टि परिवर्तनमा जती अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यती नै रोचक र गहिरा रहस्यमय चित्रहरु चित्रकारले बनाएका हुन्छन् र कथाकारले त्यस्तै रोचक पात्रहरु सत्य घटनाका प्रतिनिधिको रुपमा कथामा राखेका हुन्छन् । शिव भन्ने वित्तिकै आज अधिकतम भक्तजनहरुका मानसपटलमा सर्पको माला लगाएका, बाघको छाला बेरेका, भाङ, धतुरोको नशामा लट्ठ रहने शंकरको आकारी आकृति आउँछ । तर शिव रचयिता हुनुहुन्छ भने शकंर वहाको रचना अर्थात त्यस्ता तपस्वी व्यक्तिहरुको चिन्ह मात्र हो जसले काम, क्राध, लोभ, मोह, अहंकाररुपी सर्प माथि विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्, जसको काया चन्द्रमाको जस्तै शीतल हुन्छ र जसको सिर या मुखबाट परमात्मा ज्ञानरुपी गंगा प्रस्फुटित भएर अनेकौंको मन, बुद्धि पावन बन्दछ । अर्को तिर शंकरलाई सधैं ध्यानमग्न अवस्थामा देखाइनुले पनि पुष्टि गर्दछ की उहाँभन्दा शक्तिशाली अर्को सत्ता अवश्य कोही हुनुहन्छ । फेरी कुनै साधारण सरकारले त निषेध गरेका लागु पदार्थहरु कसरी देवहरुका देव शिवले या उहाँका सन्तान तपस्वीहरुले भाङ, भतुरा इत्यादि ग्रहण गर्छन् होला ? विवेकलाई नै सुन्य बनाउने खालका त्यस्ता नशाजनक पदार्थलाई प्रसादको रुपमा ग्रहण गराउनु भनेको त अनैतीक र गैरकानुनी कार्यलाई धर्मको नाममा संरक्षण गर्नु हो । सबैलाई श्रेष्ठ आचरण सिकाउनु पर्ने धर्मले यस्तो अधर्मको रुप किन लिइरहेको छ ? परमात्माको आज्ञा हामीलाई यस्तो थियो कि जब सृष्टिमा परमात्मा अवतरणको समय चलिरहेको हुन्छ तब उहाँको त्यो सत्य ज्ञान र योगको रुहानी नशामा रहनुपर्छ र आफले गुमाएको त्यो भित्री देवत्व पुनः जागृत हुँदै गरेको खुशीको झुलामा निरन्तर झुलिरहनुपर्छ ।
अब हेरौं कस्ता प्रकारका संकट छाएका छन् त सृष्टिमा अहिले जसकारण परमात्माको अवतरणको सबैले आह्वान र अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
१) अस्तित्वबोध संकट (Identity Crisis)
वर्तमान समयमा सबै मानवात्माहरु स्वंयको सत्य परिचय, सत्य स्वरुप र सत्य गुणहरुबाट अनविज्ञ रहेकाले थुप्रै भ्रमपूर्वक अभिमानयुक्त क्षणभङगुर कुराहरुसँग स्व अस्तित्वलाई जोड्न पुगेका छन् र फलस्वरुप दुःखि भई दिशा र लक्ष्य बिहीन जीवन बाँच्न बाध्य छन् । एक प्रकारको आध्यात्मिक रिक्तता (Acute Spiritual Depletion) संसारमा अहिले छाएको छ । जीवन र मानव जीवनको समयानुकुल लक्ष्य निर्धारित गर्नको लागि त पहिला यो जीवनरुपी रथलाई चलाउने चैतन्य ऊर्जासँग परिचित हुनु आवश्यक छ । स्वयंलाई निधारको भृकुटीमा अवस्थित एक पराभौतिक (Metaphysical Entity) ऊर्जा, एक अती शुक्ष्म ज्योतिबिन्दु आत्माको रुपमा स्वीकार गरेर यदि आत्मिक स्मृति र आत्मिक दृष्टिका साथ सम्वन्ध–सम्पर्क र कार्य व्यवहारमा हामी आउँछौं भने कर्ममा कुशलता आउँदै जान्छ । स्मरण रहोस् आत्मिक स्थितिमा रहेर सम्पन्न भएका हर कर्ममा आत्माका मूलभूत सात गुणहरु (सुख, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनन्द, शक्ति) झल्किन थाल्दछन् । तब नै यो आत्मारुपि ब्याटरी ह्रास (Spiritual Depletion) हुन् पाउँदैन र मनले परमानन्दको अनुभव गरिरहन्छ ।
२) मानवीय मूल्यहरुको संकट (Value and Ethics Crisis)
आज विश्वमा विज्ञान र प्रविधीले गरेको अनेपेक्षित चामात्कारिक उन्नतिले गर्दा संसार नै एक वैश्विक गाउँ बन्न पुगेको छ भने दुर्भाग्यको कुरा त यहाँ छ कि भौतिकताको प्रगतिसँगै मानवीय मूल्यहरुमा भयावय दरमा ह्रास आउँदै गइरहेको छ । सबै स्रोत मानिससँग उपलब्ध भएर पनि सच्चा सुख, सच्चा शान्ति र आनन्दको लागि भट्किइरहेको छ । यी सुखहरुलाई मानिसले आज इन्द्रियका सुखमा खोजिरहेको छ जसकारण काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार जस्ता विषय विकारहरुको शिकार बन्न पुगेर अझ मूल्यहिन जीवन बनाउँदै गइरहेको छ । विज्ञानका साधनहरु जुन मानिसकै रचना थिए, आफ्नै रचनाको आज रचयिता मानव दास भइरहेको स्थिति छ । अवसाद, एनजाइटी (Depression/Anxiety) जस्ता मानसिक रोगहरु तेज गतिले बढिरहेका छन् । राजनीतिमा पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरुमा नै आदर्श र नैतीकता नरहेकाले राजनैतिक अस्थिरता र अरु थुप्रै मानवीय मूल्यहरुको क्षय भइरहेको तथ्य पनि हामीहरु समक्ष स्पष्ट छ । सत्य ज्ञानको ऊज्यालेको अभावमा संसारमा अहिले नैतीक मूल्यहरुतामा तिव्र गतिले संकट आइरहेको छ ।
३) प्राकुतिक संकट (Environmental Crisis)
जनसंख्या विस्फोटका कारण प्रकृतिको अतिक्रमण भइरहेको छ । पृथ्वीमा ऊर्जाहरु त सीमित छन् तर उपभोग गर्ने जनसंख्या अत्याधिक बढिरहेका कारण सोचनीय कुरा त यो छ कि आखिर प्रकृति यसरी कहिलेसम्म सन्तुलित रहन सक्ला त ? प्रकृतिका थुप्रै हलचल जस्तै Global Warming, भूकम्प, बाढी आउने दर प्रति वर्ष बढिरहेका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढेकाले हिउ पग्लिएर समुद्रको सतह बढिरहेको छ र बाढी पहिरोका कारण खाद्द उत्पादन घटिरहेको छ । विज्ञहरुको भनाई छ कि दीगो रुपमा (Sustainably) पृथ्वीले जम्मा १.५ अरब जनसंख्या धान्न सक्दछ तर अहिले पृथ्वीको जनसंख्या ७.५ अरब भन्दा बढि नाँघिसक्यो ।
४) आर्थिक संकट (Economic Crisis)
आधुनीकीकरणसँगै मानिसमा उपभोगीकरण (Consumerism) बढिरहेको छ । भौतिकतामा चुर्लुम्बै डुबेर यो कुराको आज विस्मृति भएको छ कि मानव जीवन उपयोगी बन्नको लागि हो न कि उपभोगि बन्नलाई । मानिसका अनियन्त्रित इच्छाहरुका कारण आज विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ । ग्रिस र स्पेनका बैंकहरु Bail Out भएको समाचारहरु त हामी बिगतका वर्षहरुमा सुनिरहन्थ्यौैं तर अर्थविद्हरुको मान्यता छ कि स्वीट्जरल्याण्ड र विश्वका केही देश वाहेक सबै देशहरु ऋणमा चलिरहेका छन् ।
५) ऊर्जा संकट (Energy Crisis)
अर्को मुख्य संकट वर्तमान समयमा देखिएको छ ऊर्जा संकट । हामी जति पनि ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छौं अधिकतम त पुन नवीकरण (Non Renewable Source) गर्न नसकिने ऊर्जाका स्रोतहरु प्रयोग भएका छन् । हरेक दिन सूर्यले हामीलाई असीमित ऊर्जा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिरहेको छ । सौर्य ऊर्जा जुन Renewable Source Of Energy लाई अधिकतम प्रयोग गरिने हो भने ऊर्जा संकटमा कमि आउने थियो होला । यसकै जीवन्त उदाहरण संस्थाको मुख्यालय माउन्ट आबुमा देख्न सकिन्छ । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि विकाससँगै चाहिए जति विद्युत उत्पादन हुन नसकेकाले नेपालीहरुले थुप्रै घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्न परेको छ । गाडीहरु चल्ने पेट्रोल, डिजेल पनि पुन नवीकरण (Non Renewable Source) गर्न नसकिने ऊर्जाका स्रोतहरु हुन् । एक दिन यस्तो पनि नआउला भन्न सकिन्न जब ती उर्जाहरु पनि पृथ्वीको गर्व भित्र पनि रिक्त हुनेछन् ।
अतः यस्ता कालकटंक र संकटहरुलाई मोचन गर्ने संकटमोचक शिव परमात्मा यस धर्तीमा अवतरित भइसक्नुभएको छ । सुख, शान्ति र समृद्धिले भरिएको एक नयायुगको स्थापनाको लागि उहाँ साधारण साकारी माध्यम प्रजापिता ब्रम्हाको तनमा आइसक्नुभएको छ । यस पावन पुनित पर्वको यही दिव्य सन्देश छ कि शिव परमात्मालाई प्रेमपूर्वक याद गर्नाले हामी सबै प्रकारका पापहरुबाट मुक्त हुन सक्छौं । सारा रात जागरण गर्नुको यही रहस्य हो की हाम्रो जीवनमा आध्यात्मिक जागृति भइरहोस्, वा हामी दैनिक परमात्मा प्रदत्त ज्ञान श्रवण गरिरहौं । हामी आफ्नो नराम्रो कर्मको कारण भ्रम वा विकाररुपी मायाको वशिभूत भएर दुख, चिन्तालाई आह्वान नगरौं र हामीबाट सत्कर्म नै भइरहुन् ।
महाशिवरात्री पर्वमा उपवासको ठुलो महत्व हुन्छ । उपको अर्थ हो समिप र वासको अर्थ हो निवास गर्नु । मन र वुद्धिद्वारा परमात्माको समिप रहनु यही उपवासको आध्यात्मिक रहस्य हो । अब भौतिक शरिरमा निहित आत्मा गएर पराभौतिक सत्ता परमात्माको उप वा नजिक कुन विधीले वास गर्न सक्छ त ? संकल्प शक्तिद्वारा मन वुद्धिको तार परमात्मासँग जोड्नु नै सच्चा उपवास हो र यो आत्मारुपी ब्याटरीलाई परमात्मारुपी पावरहाउससँग जोडेर चार्ज गर्ने सहि विधी हो । यस पावन पर्वमा तीन पात वाला वेलपत्र शिवलिङग माथि चढाइन्छ यसको अर्थ हुन्छ आफ्नो तन, मन, धनलाइ शिवमा अर्पित गरेर मन, वचन, कर्मबाट पवित्र रहनु । परमात्मा शिव हाम्रो हृदयपूर्वक गरिएको मुक्तीको चाहनाको पुकारलाई सुनेर धर्तीमा अवतरित हुनुहुन्छ र हामीलाई अदुभुत ज्ञान दिनुहुन्छ । यही कुरालाई प्रतिकात्मक रुपमा शिवलींग माथी एक कलष देखाइन्छ । जसबाट थोपा थोपा पानी शिवलिङग माथि टप्किइरहन्छ ।
तसर्थ भक्तहरुले शिवलाई प्रसन्न गर्नको लागि सच्चा मनबाट भक्ति गर्दैं आए…अब भगवान शिव भोलानाथ भक्तहरुको पुकार सुनेर प्रसन्न हुनुभएको छ र प्रसन्न भएर वरदान दिइरहनुभएको छ । अनेक आत्माहरु उहाँबाट वरदान प्राप्त गरेर धन्य धन्य भइसकेका छन् । तपाईलाई पनि यदि वरदान लिनु छ भने शिवले स्वयं अती प्रेमपूर्वक तपाईंलाई बोलाइरहनुभएको छ…मेरा मीठा लाड्ला बच्चाहरु ! छिटो छिटो मेरो समिप आउ ।